Ukubukeka okuhle Egunjini Elizimele - I-Airbnb
Ukubukeka okuhle Egunjini Elizimele
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Anne
Ikamelo elisanda kulungiswa eliphakathi nebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka e-Nelson Bay CBD, amabhishi nehhovisi lokubhukha okwenziwayo. Leli nani lihlanganisa wonke amathawula welineni kanye nesidlo sasekuseni esidliwayo.
Inomabonakude, i-microwave, iketela, i-toaster ne-air conditioning. Futhi ukufinyelela kuphezulu ngendiza eyodwa yezitebhisi.
Indawo enhle yokuhlala eseduze namabhishi nezindawo zokudlela
4.94 · 432 okushiwo abanye
Eduze namabhishi izitolo kanye nokuhambahamba okuningi okuhle
Iyatholakala ezivakashini ukuze zithole imininingwane